အသက် ၁၈ နှစ် - ED သည်ကုသပေးသော်လည်း HOCD - Your Brain On Porn ကိုကုသနေဆဲဖြစ်သည်
အသက် ၁၈ - ED သည်ကုသသော်လည်း HOCD ကိုတိုက်ခိုက်နေဆဲဖြစ်သည်
ဟေ့ယောက်ျားတွေ, ဒီက noFap အပေါ်ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးကြိုးပမ်းမှုမဟုတ်ပါဘူးသော်လည်းကျွန်မ reboot အကြောင်းကိုသင်ပြောပြပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။
ငါ reboot လုပ်ဖို့စတင်ခဲ့ကတည်းကတိုတိုရှိနေတတ်တယ်ခုနှစ်တွင်3တစ်လအကြာခဲ့။ ငါတစျဦးတစျခုလုံးကိုခြောက်သွေ့တဲ့လအပြီးပြန်ရောက်သွားတယ်။ ဒါဟာသဲကန္တာရကိုဖြတ်ပြီးရှည်လျားသောလမ်းခဲ့, ငါသည်အိုအေစစ်ကြည့်ဖို့ထင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ကျွန်မအလွန်ကြီးစွာသောတိုးတက်မှုအသိအမှတ်ပြုပထမဦးဆုံးအကြိမ်ကျွန်မပထမဦးဆုံးမှာရှေ့ကနေ, ထို့နောက် MO'ed, PMO'ed ထို့နောက်ရက်သတ္တပတ်၏စုံတွဲတစ်တွဲတော့ဘူး။ (I'll ကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာရှင်းပြ) ။ မနေ့ကငါ့အနောက်ဆုံး MO ကိုကတည်းကသုံးပတ်ခဲ့, ယနေ့ငါ masturbated နဲ့ကျွန်မဒီနေ့ရပ်တန့်ဖို့အကောင်းဆုံးနေ့ဖြစ်သောကြောင့်, သင်ယောက်ျားတွေနဲ့ငါ့ခရီးမျှဝေအခုအချိန်မှာထိုသို့ပြုမှဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ရှိနေတတ်တယ်!
လြှံ 18 အသက်အနှစ်နဲ့ကျွန်မလုံးကိုပစ္စည်းပစ္စယ edging အကြိမ် porn စုံတွဲတစ်နေ့, စောင့်ကြည့်,5နှစ်ပေါင်း masturbated ။ ယခုနှစ်ငါအမှန်တကယ်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့မေတ္တာ၌ကျဆင်း 16 လှည့်။ ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီကတခြားချိတ်ဆက်ထားသောကြောင့်အသုံးပြုမှုနှစ်ဦးစလုံးဘယ်မှာစိတ်ခံစားမှုဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်အလွန်ကောင်းသောအချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမသည်အလွန်ကြီးစွာသောဟာသခဲ့ရပြီးရှာနေအလွန်ကောင်းသည်, ဒါလ၏စုံတွဲတစ်တွဲပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်ပိုင်းအတွေ့အကြုံများအလွန်တင်းမာနေနှင့်ပြည့်စုံရာရှိသတည်း။ ငါသည်ဤဆက်ဆံရေးမျိုးအကြောင်းကိုပဲလည်းငါ PMO ကျနော်တို့အတူတူဖြစ်သည့်အချိန်ဆဲပါကြောင့်တင်းမာနေနှင့်ငါ၏အသက်တာ၌လိင်နှိုးဆွသော, မဖော်ပြထားခြင်းရှိခဲ့ကြောင်းဖော်ပြနိုင်ဖို့, ထိုအများကြီးစကားပြောလို don't ။
သူမတစ်နှစ်အခြားတိုင်းပြည်သို့ပြောင်းရွှေ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့တက်ဖဲ့သောအခါကျွန်မစိတ်ကျရောဂါအတွက်ကျဆင်းခဲ့သည်။ ငါသည်ငါ၏အသက်တာ၌အဘယ်သို့ပြုရမည်ကိုသိဆဲပါ, စိုးရိမ်တက်စပျစ်သီးပျဉ်နဲ့ကျွန်မလညျးတဖနျ porn စောင့်ကြည့်ဖို့စတင်ခဲ့တယ်။ အခြို့သောအချိန်ပြီးနောက်ငါမှာပထမဦးဆုံးအကြှနျုပျ၏စိတ်ကျရောဂါများထဲကငါ့ကိုရဖို့ရန်အသုံးပြုသည့်အခြားမိန်းကလေးတစ်ဦးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်။ သငျသညျအကြှနျုပျ၏ပထမဦးဆုံးတဦးတည်းနှင့်လည်းရုတ်တရက်ကြိုးခုတျလှဲလိင်မှဆက်ဆံရေးနှိုင်းယှဉ် can't ။ သူမသည်ဒါငါပျော်မွေ့သူမ၏ရန်ကြီးမားသောဖိအားသို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်မှတ်ထားအစစ်အမှန် arousal ၏မရှိခြင်းနှင့်အတူပေါင်းစပ်သူမကမတိုင်မီလိင်စဉ်အတွင်းတို့သည် လာ. ဘယ်တော့မှကြောင်းပြောပြတယ်။ ဒါဟာရှေ့ဦးစွာ မှစ. အလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့်ငါ့စိုက်ထူကျနော်တို့လိင်ခဲ့အခါတိုင်းအားနည်းခြင်းနှင့်အားနည်းလာပြီမှမရှိစေရန်ဆဲပါကျွန်မရဲ့လိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့မေးခွန်းထုတ်လာတယ်။
ယခုဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ YBOP သုံးစွဲအချိန် HOCD အကြောင်းကိုငါသိသောအရာတို့ကိုငါမိစ္ဆာဆက်ဆံရေးဟာဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး, ဆင်းငြိမ်သက် porn ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့အတိတ်ကာလ-ငါ့ကိုပြောပြပါလိမ့်မယ်သငျသညျဖြစ်ပျက်စိတ်ကူးနိုငျသောကွောငျ့:
"အိုး, အဘယ်ကြောင့်ငါ့ကိုအစဉ်မပြတ်ငါခစျြ၏မိန်းကလေးငယ်များ, WTF, ဤစကားမှန်ပါလိမ့် can't": ငါ, ရုတ်တရက်တူသောအတှေးအလိင်တူချစ်သူလှည့် haven't ကြောင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစည်းရုံး, ငါ့ arousal စစ်ဆေးနေအကြိမ်နေ့တိုင်းစုံတွဲ masturbate မှစတင်ခဲ့သည်။ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ - - စိုးရိမ်ပူပန်ဒီတော့စိုးရိမ်၏တစ်လထိုနောက်ငါစစ်ဆေးနေ, ကျောင်းထဲမှာမိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများမှာရှာဖွေနေသောအခါအကြှနျုပျကိုသည်အခြေအနေ၌ငါ၏အလိင်မေးခွန်းထုတ်အောင်စဉ်ဆက်မပြတ် HOCD တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာဖန်တီးခဲ့သည်။ ဒါဟာငါ့အဦးနှောက်ခိုင်မာတဲ့မှဦးဆောင်နှင့်လိင်တူချစ်သူတှေးအချေါနှငျ့ငါစကားလုံးက "လိင်တူချစ်သူ" ကိုကြားတိုင်းအချိန်ပြောင်းလဲနေတဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှိုးဆွနှင့်အတူ fucked သောကြောက်မက်ဘွယ်သောလိမ်ခဲ့သည်။
မှားယွင်းနေခုတ်လှဲ၏သို့သော်ကအားလုံးကိုကြင်နာ - အစဉ်မပြတ်ငါသိပေမယ့်လိင်တူချစ်သူ porn မှ 24 /7တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဟာဖြောင့်ကမ်ဘာပျေါတှငျအကြှနျုပျကိုစောင့်ရှောက်ရန်သလိုပဲဒါကြောင့်ဒီအချိန်၌ငါသည်ဤ creepy အတွေးအခေါ်တွေကိုရှင်းပြနိုင်ဘူးငါဆဲပါဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာသိ ။
ဤသူသည်ငါ YBOP အပေါ်လဲအချိန်ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါသည်ခပ်သိမ်းသောဗီဒီယိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းထဲမဝငျ ED နှင့် ပတ်သက်. အပေါငျးတို့သပို့စ်များကိုဖတ်ပါ။ ပထမတော့ငါကအခြားလူမျိုး၏ပုံပြင်များ, ငါ၏အမှုဆင်တူပေမယ့်ဦးနှောက်ကိုငါ့လိင်တံနှင့်အတူချိတ်ဆက်ပုံကိုဖတ်ရှုခြင်း, နှစ်ဦးစလုံးကြောင့်ကဲ့သို့ Coolidge အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ပစ္စည်းပစ္စယများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသွင်ပြင်လက္ခဏာကိုဖန်ဆင်းကြောင်း weren't ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အတော်လေးယုံကြည်တယ် wasn't ငါ့ကိုညစ်ညမ်းကျိန်းသေငါ၏အထူးဆန်းတိုးတက်မှုနဲ့ချိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နဲ့ကျွန်မချက်ချင်းနုတ်ထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်။ ကျနော်တို့ကိုတက် fucked sexlife အပေါ်ငါ၏အကြံအစည်နှင့် ပတ်သက်. ငါ၏အရည်းစားကိုပြောသည်နှင့်သူမကအကောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါသည်ငါ့ဘရောက်ဇာနှင့်အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်အပေါငျးတို့သတားမြစ်ထားက်ဘ်ဆိုက်များကိုပိတ်ဆို့ထား။ ငါအားကစားလုပ်ပေးနှင့်ကျောင်းများအတွက်သင်ယူဖို့စတင်ခဲ့တယ်။ ပထမဦးဆုံးနှစ်ပတ်အတွင်းပြီးနောက်ကျွန်မတော်တော်လေးကောင်းသောစိတ်ဓါတ်များခဲ့လည်းငါ့အရည်းစားနှင့်အတူယခုမဟုတ်တဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးဟာကယ်ဆယ်ရေးစခန်းမှကျနော်တို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုထားစိတ်ဖိစီးမှုသလိုပဲ။
ထိုအခါငါ HOCD အကြောင်းပို့စ်ကိုဖတ်ပြီးကြောင့်တစ်ဦး Epiphany ဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ငါ၏အကြံအစည်များနှင့်ငါ၏အလေ့အကငျြ့, ငါ၏အပြုအမူအကြောင်းကိုရေးသားခြင်းငါ့နောက်သို့အားလုံးအချိန်ကိုရပ်နေ၏တူသောဒါဟာဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ့ထံသို့ဖြစ်ပျက်အားလုံးသည်ထူးဆန်းပစ္စည်းပစ္စယရုတ်တရက်အသိ လုပ်. ငါသည်ငါ့ခရီးကိုဆက်လက်တကယ်လှုံ့ဆော်ခဲ့သည်။ အကြှနျုပျ၏ရည်မှန်းချက်အနည်းဆုံးနှစ်ခုတစ်လဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါတစ်နေ့ 40 မှာတုန်းကငါလိင်ခဲ့ရပြီးငါစိတ်ကူးထက်ပိုကောင်းခဲ့ပါတယ်။ ငါရော့ခ်-ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်နှင့်ကျိန်းသေနှိုးဆော်ခြင်းနှင့်ယခုအချိန်အထိပြောင်းလဲသွားသမျှသောအမှုအရာမှာနောက်ကျောကိုရှာဖွေနေ, မသိစိတ်တစ်ပိုင်း၏ (ခံစားချက်, စိုးရိမ်, လှုံ့ဆျောမှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျြောအပါး) ငါကြင်နာပြုထင်ခဲ့တယ်။ ငါသည်ငါ့ပြက္ခဒိန်ထဲမှာရက်ပေါင်းမှတ်သားရသောအခါအကြီးမားဆုံးအမှားအရေးမစိုက်ဖြစ်ဖို့ပဲစဉ်းစားပါ။ ငါသည်ငါ့ reboot ၏အခြေခံအရာစောင့်ရှောက်ခြင်း wasn't ကြောင်း၏ရလဒ်အဖြစ်ငါထိုနေ့ရက်ကာလကိုလည်းရက်ပေါင်းနှင့်တိုင်း reboot ၌ဤရက်ပေါင်းရှိပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်လမ်းကိုရေတွက်ခြင်းနှင့်တော့ဘူး။
သင်ပြုသောအမှုနေကြသည်ထင်လျှင်, သင် HOCD ရှိတယ်အထူးသဖြင့်အခါ, အခြားတစ်လပြုပါ! - အကယ်၍ သင်လုပ်ပါကသင်၏ဆီးကျိတ်သည်ပေါက်ကွဲလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ … ငါကတိပေးတယ်!
ငါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးက reboot စဉ်းစားဘဲ, နည်းမှန်လမ်းမှန်ပါပြီမယ်လို့နှင့်သင့်အသက်တာကိုနည်းမှန်လမ်းမှန်ပေါ်သွားသော်လည်းငါ့ဦးနှောက်ကိုညစ်ညမ်း arousal ကနေရ, မ HOCD ကနေကျိန်းသေဟန်ချက်ညီမဟုတ်ခဲ့, သုံးလပြည့်စုံခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ထိုကာလ၏တဦးတည်း လာ. , ငါ masturbate ဖို့ခက်ခဲတတ်ပြီးခဲ့တောင်မှလိင်တူချစ်သူပစ္စည်းပစ္စယစဉ်းစား။ ဒါဟာဓါးနှင့်အတူနောက်ကျော၌ငါ့ကိုဝင်တိုက်နဲ့ကျွန်မမြေပြင်ပေါ်တွင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါဖြောင့်ခြင်းနှင့်လိင်တူချစ်သူနှစ်ဦးစလုံး, porn စောင့်ကြည့်ကာလ၏စုံတွဲတစ်တွဲပြီးနောက် ... အဆိုပါအရူးအရာနှစ်ဦးစလုံးဆဲပါငါ့ကိုနှိုးဆွသူတို့ထဲကပင်တလမ်း (၏သင်တန်းငါအော်ဂဇင်အတင်းအကျပ်နိုင်သင့်တယ်, ဒါပေမယ့် wasn ကြောင်းကြီး MO'ed ) အမှန်တကယ်ပျော်မွေ့'t ။ ငါကငါ့အစုစုပေါင်းရှုပ်ထွေးမှုများနှင့်စိတ်ပျက်မိကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ရလဒ်များအရအိပ်ယာအကျိုးသက်ရောက်မှု၏ကြင်နာခဲ့ထင်ပါတယ်။
ငါသည်ငါ့ reboot ဆက်လက်နဲ့ကျွန်မကိုလည်းတားမြစ်ထားအတှေးအကြှနျုပျကိုအမှန်တကယ်ဤအရာများကိုကျင်းညစ်ညမ်းမြင်နေထက်ပိုနှိုးဆော်ခြင်းသဘောပေါက်ဖို့လိုသဘောပေါက်လာတယ်။ ဒါဟာကြောင့် HOCD တစ်ဦးခွေးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမှငါ့ကိုအနည်းငယ်ထပ်တိုး ပေး. , ဒါပေမယ့်ကျနော်မေးခွန်းထုတ်နှင့်စစ်ဆေးခြင်းကိုအသကျရှငျကဒီမလိုချင်တဲ့အတွေးအခေါ်စောင့်ရှောက်သည့်အဆိုးဆုံးအရာကြောင်း, HOCD သုတေသနအပြည့်အဝမက်ဆေ့ခ်ျကိုရဆဲပါ။ ဒါနဲ့နေဆဲစိုးရိမ်ခဲ့ရသည်။ (ကနည်းနည်းဘက်မှတ်စုအဖြစ် - ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးရည်းစားနောက်ကျောကိုငါ့ကျောင်းမှာ လာ. , သူမ don't ဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့ဘူးငါ့ကိုချင်ခက်ခဲဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ကျွန်မသူ့ကိုမြင်သောအခါ, ကကြင်ကြင်နာနာ၏ပေါ်မှာငါ့ကိုလှည့်)
အဘယ်သို့ငါကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံး relapse ပြီးနောက်တစ်လကနေလေ့လာသင်ယူအလွန်အရေးကြီးပါသည်:
ဆေးလိပ်သောက်ပေါင်းပင်သင့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖကျြဆီးနိုငျ !! - ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးအားသင်ပေါ့ပေါ့ဆဆသင့်ရဲ့လိင်တံကိုထိစေတယ်။
ငါ၏အအသစ်တဖန်ပြန်လည်စတင် (အဘယ်သူမျှမ PMO, ငါသိ၏မိန်းကလေးတွေနဲ့အတူစိုစွတ်သောအိပ်မက်, အလိုအလျောက်စိုက်ထူ, နံနက်သစ်သား) ၌ကြီးသောတိုးတက်မှုအောင်တစ်ပတ်ကာလအတွင်းကျွန်မကောင်းသောခုတျလှဲပေမယ့်ပထမဦးဆုံးတနင်္ဂနွေပေါ်မှာငါနှင့်အတူပေါင်းပင်သောက်သည်: လာမယ့်ရက်သတ္တပတ်အားလုံးအတူတူပင်ဖွဲ့စည်းပုံခဲ့ ငါ၏အရည်းစား, အလွန်နှိုးဆော်ခြင်းခံရအများပြည်သူအတွက်ကောင်းသောလိင်ဆက်ဆံတက်အဆုံးသတ် - မဟုတ်သင်ထင်စေခြင်းငှါအဆိုးဆုံးအရာ။ အဆိုပါကိစ္စတွင်မျှမိန်းကလေးငယ်တစ်ဝှမ်းရှိကြ၏အခါ, ငါ (နှစ်ဦးစလုံးဖြောင့်ခြင်းနှင့်လိင်တူချစ်သူအတွေးများကို) masturbating တက်အဆုံးသတ်မယ်လို့, အခြားအောက်ပါတနင်္ဂနွေကြောင့် - ငါ add ဖို့ရှိသည်, သင်များစွာသောယောက်ျားတွေမှမတူဘဲလြှံ, ငါကိုဖတ်ပြီးအဖြစ်အလွန်ကြောင်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတဲ့အခါမှာမြင့်မားတဲ့လြှံ (တည်းဟူသောငါ၏ PMO အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတစ်ဦးသည်အခြားနက်ရှိုင်းသောအချက်ဖြစ်သည့်အများပြည်သူအတွက် MO'ed) - လြှံနောက်တစ်ကြိမ်ကြောင်းမိုက်မဲလိမ့်မယ်ဘယ်တော့မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှကတိပေးငါလုပ်ခဲ့တယ်ညာဘက်ပြီးနောက်အကြောင်းကိုအလွန်အမင်းဒေါသထွက်နေတဲ့ဖြစ်ခြင်း, နောက်တဖန်ပေါင်းပင်လာမည့်တနင်္ဂနွေဆေးလိပ်တက်အဆုံးသတ် ...
သုံးပတ်အကြာကျွန်မရိုးရိုးဖြစ်သို့မဟုတ်မပေမယ့်ပထမဦးဆုံးမှာအေးဆေးဖြစ်နှင့်အစစ်အမှန်ငါ့ကိုစူးစမ်းငါ့ reboot နှင့်အတူအသုံးအနှုန်းများလာရန်စခွေငျးငှါကိုလက်ခံဖို့ငါနှင့်အတူအသက်ရှင်ဖို့, ငါ့စိုးရိမ်မှုတွေကိုကျော်ရရန်ရှိသည်သဘောပေါက်လာတယ်။ ငါသုံးပတ်ကြာ PMO ဆဲပါ။ ဤအချိန်အတောအတွင်းကျွန်မနှစ်ခုသာလိင်တူချစ်သူအကြံအစည်ရှိခဲ့သူတို့သည်လည်းငါ၏သစ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်ငါ့ကိုထိခိုက်စေ couldn't ။ ကျွန်တော်တစ်ဦးရည်းစားနှင့်အတူ reboot အကြောင်းကိုဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်သောကွောငျ့ကြှနျတေျာ့ရည်းစားနဲ့ကျွန်မအကြောင်းကိုပြန်လည် sensibilation နည်းလမ်းများနှင့်ပစ္စည်းပစ္စယအပေါငျးတို့သညျဤကြင်နာကယ်တင်အနည်းဆုံးနှစ်ခုတစ်လအတူတကွအိပ်ပျော်နေသောကိုရပ်တန့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ သူမတကယ်ပဲငါ့ကိုအထင်ကြီးသော်လည်းငါသည်လည်းအခြားမိန်းကလေး, flirty ပျြောလမ်းများ၏ကြင်နာဖို့ပြောနေတာအတွက်ကောင်းသောတိုးတက်မှု လုပ်. ငါဒါလုပ်နေတာကအလွန်အထူးကြပ်မတ်ခွအေနကေိုကြုံတွေ့, ငါမျိုးစိတ်ပျက်ငါကျပန်းမိန်းကလေးငယ်များ fuck ဆိုတဲ့လွန်းသစ်စာရှိတဲ့ဖြစ်ကြောင်းကိုခဲ့သည် သူမ၏ကြည့်နှင့်တစ်ဦးလိမ္မာပါးနပ်နှင့်ပင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလမ်းပေါ်မှာငါ့ကိုစိန်ခေါ်၏သူမ၏ snappy လမ်းနှင့်အတူ။ ဤသည်အထူးသဖြင့်အခွအေနေကိုငါ့ scumbag ဦးနှောက်ငါသည်ကိုယ်လုပ်ဖို့မဟုတ်ဘဲတပြင်လုံးကိုအချိန်ကိုပြောသည်သော်လည်းနောက်မှငါ့ကိုအချို့အားကြီးသောရမ္မက်ပေးဖို့ငါမဆီးတားနိုင်အောင်ခိုင်မာတဲ့ထင်ကြပေမည်ဒါကြောင့်အကောင်းပဲ! ဒီမိန်းကလေးသိရန်လာပြီပေါင်းသူမ၏အဘို့ကိုမှန်ကန် arousal ရတဲ့ထိုကဲ့သို့သောအကြီးအရာကြောင့်ငါလုပ်ခဲ့တယ်သည်အထိငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်တကယ်ဂုဏ်ယူခဲ့, နေဆဲဒီမိုက်မဲနှင့် ပတ်သက်. အမျက်ထွက်ဖြစ်၏။ ငါသုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ကြောင်း willpower ငါ၏မရှိခြင်းအကြောင်းကိုဒီတော့စိတ်ပျက်ခဲ့ - "! ဟေးကောင်းတဲ့သင်ဖြည့်ဆည်းဖို့" - ငါ့ HOCD အတွက်ကန်, ငါကိုစစ်ဆေး porn watched - သင် HOCD မျိုးစုံနည်းလမ်းတွေအပေါ်ထဲမှာကန်နိုင်ပါတယ်ကြည့်ရှုနိုင်သကဲ့သို့။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေယခုစတုတ္ထနေ့နဲ့ကျွန်မငါသည်သင်တို့၏ထောက်ခံမှုလိုအပ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သငျသညျယောက်ျားတွေကြီးမြတ်ဖြစ်ကြပြီးငါ YBOP အပေါ်ရေးသားချက်များကိုဖတ်ရှုအခါတိုင်းငါသိ၏ပင်ကျွန်မသေးအောင်မြင်ရန် couldn't အဘယ်အရာကိုအောင်မြင်ရန်ပြဿနာများနှင့်အတူရုန်းကန်ကြောင်းအစစ်အမှန်သူရဲကောင်းများကြည့်ပါ။ ငါငါပြုသကဲ့သို့သင်တို့ကိုယောက်ျားတွေစိတ်ပျက်မတတျနိုငျဖြစ်ကြောင်းကိုထင်ငါ၏အညစ်ညမ်းပြဿနာများအကြောင်းကိုငါ့အမိတ်ဆွေများနှင့်ရည်းစားကိုပြောသည်ပေမယ့်ရှိပါတယ်ဤမျှလောက် willpower ဒီ site ပေါ်တွင်ဖြစ်ပြီး! ယနေ့ငါ PMO won't နှင့်မနက်ဖြန်နေ့နေ့, အရေးကြီးသောအရာတစ်ခုခု I'll ကျိန်းသေသင်သိပါစေဖြစ်ပျက်လျှင်! ငါသည်ငါ၏စိုးရိမ်ပူပန်သွားကြပြီငါကျိန်းသေပြုလုပ်ထားတယ်ပြီးသားအဆိုးဆုံး ED ပျောက်ကွယ်ပေမဲ့အချို့အချိန်လိုအပ်မယ့်အရာ, ဒါကြောင့်ဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်သည်လမ်းခရီး၌လိင်တွေ့ကြုံခံစားနိုင်ဖြစ်ကြောင်းကိုတောငျ့သောဤ reboot ပြုလိမ့်မည်။
relapses တစ်အလားတူပမာဏကိုရှိသည်သောသူအပေါငျးတို့သယောက်ျားတွေမှ မင်းလက်ကိုအမှီပြုနိုင်တဲ့ထပ်ခါထပ်ခါပြန်ဖြစ်မှုများကိုသင်စိတ်မပူပါနဲ့ဟုပြောလိမ့်မည်။ သင်ဘာတွေလုပ်နိုင်တယ်၊ ပြီးပြီသင်ပြီးမြောက်နိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးပျောက်ကွယ်သွားမှာမဟုတ်ဘူး - အကောင်းမြင်မှုကိုသာစဉ်းစားပြီးအရင်ကထက်ပိုပြီး reboot လုပ်ပါ။ - အကယ်၍ သင်လိုအပ်လျှင်စင်ကြယ်သောခါးပတ်ကို ၀ ယ်ပါ။ - အမျိုးသားများအတွက်တစ် ဦး ကိုရှာမတွေ့ပါ။ သို့သော် - D ... ကျွန်ုပ်အားလုံးသည်သင်ကိုယ်တိုင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်သောနင့်ကိုညစ်ပတ်နေသောညစ်ညမ်းသောလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်အရေးကြီးသောအလုပ်တစ်ခုလုပ်နေသည်ဟုထင်သည်။ ကောင်းပြီ! ငါ့ကိုမေးကြည့်ပါ။ Ps ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်၏ဘာသာစကားအရည်အချင်းနှင့်စိတ်ရှည်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်အင်္ဂလိပ်စာကိုကျောင်းတွင်ဆက်လက်သင်ယူနေဆဲဖြစ်သည်။
LINK - အသက် ၁၈ မှ ၃ လအထိ ED ကုသမှုခံယူ - HOCD - ယခုတတိယနှင့်နောက်ဆုံးကြိုးစားမှုဖြစ်သည်